ရုတ်တရက် လေဖြတ်ခံရသော လူနာအတွက် သွေးဖောက်ပြီး အမြန်ကယ်ဆယ်ကုသနည်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ရုတ်တရက် လေဖြတ်ခံရသော လူနာအတွက် သွေးဖောက်ပြီး အမြန်ကယ်ဆယ်ကုသနည်း
ရုတ်တရက် လေဖြတ်ခံရသော လူနာအတွက် သွေးဖောက်ပြီး အမြန်ကယ်ဆယ်ကုသနည်း
Posted by ဆူး on Aug 3, 2010 in News |3comments
ပထမ အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ လေဖြတ်သော လူနာကို ဧည့်ခန်း၊ ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာခန်း စသည် ဖြင့် မည်သည့်နေရာတွင်မဆို လေဖြတ်ပါက ဖြစ်သောနေရာမှ ရွှေ့ပြောင်းသယ်ယူခြင်း လုံးဝ မပြုလုပ်ရပါ။ ထိုသို့ ချက်ခြင်းရွှေ့ပြောင်း သယ်ဆောင်ပါက ကားဆောင့်ခြင်း၊ လှုပ်ရှားမူဒဏ်များကြောင့် ဦးနှောက်သွေးကြောလေးများကို ပိုပြီးလျှင်မြန်စွာ ပေါက်ကွဲစေပြီး၊ လူနာရဲ့ အခြေအနေကို ပိုပြီးဆိုးဝါးစေပါသည်။
ထို့ကြောင့် လူနာကို မည်သည့်နေရာတွင်မျှ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်၊ လူနာကိုဖြစ်သည့်နေရာတွင်ပင် အသာထူပေးပြီး ပြန်လဲမကျသွားစေရန် အသာမှေးပြီး ထိုင်စေရပါမည်၊ လူနာကို ကိုယ်တိုင် မထိုင်နိုင်ပါက ဘေးမှ လူတစ်ဦးက အသာမှေးပြီး“မ´´ပေးထားပါ၊ ထိုသို့ ထူ“မ´´ပေးပြီး ချက်ချင်း ပိုးသတ်ထားသော ဆေးထိုးအပ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ မီးရို့ပြီးသောလက်ချုပ်အပ်ဖျားဖြင့်သော်လည်ကောင်း၊ လူနာရဲ့ လက်ချောင်း(10)ချောင်းထိပ်ဖျား ပိုးသတ်ထားသော အပ်ဖြင့် (ပဲစေ့ခန့်) သွေးစက်တစ်ဝက်စီ ထွက်လာအောင် ဖောက်ပေးပါ။ သွေးပဲစေ့ခန့် ထွက်မထွက် ခေတ္တစောင့်ကြည့်ပါ။
အကယ်လို့သွေးမထွက်ပါက သွေးထွက်လာအောင်လက်ဖြင့် ညှစ်ထုပ်ပေးပါ။ လက်ချောင်းတိုင်း သွေးတစ်ဝက်စီ ထွက်လာပြီး၊၊ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း လူနာပြန်လယ် သတိရပါလိမ့်မယ်။ အကယ်လို့ လူနာပါးစပ်ရွှဲသွားပါက နားဖောက်သည့် နေရာနားလောက်တွင် ပိုးသတ်ထားသော အပ်ဖြင့် တစ်ဖက် နှစ်ချက်စီဖောက်ပေးရပါမည်။ နားရွက်နှစ်ဖက်စလုံး သွေးစက်နှစ်စက်စီ ပဲစေ့ခန့်ထွက်လာပြီး၊ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ပါးစပ်ရွှဲရာမှာ ပြန်လယ်တည့်သွားပါလိမ့်မည်။ ထိုလူနာ ပုံမှန်အခြေ အနေသို့ ရောက်အောင် စောင့်ပြီးမှ ဆေးရုံသို့ ပို့ပြီး လိုအပ်သော ဆေးကုသမူကိုခံယူပါစေ။ ယခုကဲ့သို့ ရှေ့ဦးစွာ ပြုစုပြီးမှ ဆေးကုသခံစေပါက အကြောသေခြင်း ကိုယ်တစ်ခြမ်းသေခြင်း ခြေလက်လှုပ်မရခြင်း စကားမပီဖြစ်ခြင်းတို့မှ လုံးဝ ကင်းလွတ်စေပါမည်။
လည်းကောင်းနည်းမှာ လက်တွေ့ပျောက်ကင်းသက်သာစေသောနည်းဖြစ်ပါသည်။ လည်းကောင်းနည်းကို လူအများလေဖြတ်ခြင်း ဝေဒနာမှ ကင်းဝေးစေရန်အတွက် မေတ္တာစေတနာဖြင့် ကုသိုလ်ယူကြပါ။ လည်းကောင်းနည်းသည် ကိုယ်တွေ့လက်တွေ့လူနာကို ပြုစုပေးခြင်းဖြင့် ရာနှုန်းပြည့် အောင်မြင်သော နည်းဖြစ်ပါကြောင်း အာမခံပါသည်၊
တခုကျန်သေတယ်လိုထင်ပါသည် ခြေထိပ် ၁၀ချောင်းပါဖောက်ဖိုလိုလိမ်မယ်နော် ကျန်တာတွေကတောပြည်စုံကါသည်။ခန္ဒာကိုယ်ပေါ်ပိုင်းအတွက် နားနှင်လက်ထိပ် အောက်ပိုင်းအတွက်ခြေထိပ်ပါလိုအပ်ပါသည်။
This is the rubbish myanmar traditional idea. That has no evidence, scientifically approved and is stupids’ says.
ဟုတ်ပါ့မလားကွာ…..။ တစ်ခါမ လည်းမကြားဘူးဘူး……။ လုပ်ကြပါဦး ဆွေးနွေးကြပါဦး။